Kulanka Afar maalmood soconaya oo TPEC uga furmay Garoowe [Sawirro] – TPEC
GAROWE, TPEC- Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland, ayaa maanta magaalada Garoowe ku qabtay kulan socon doona Afar cisho oo looga hadli doono Istaraatiijiyadda Guddigan uu ku shaqayn doono saddexda sano ee soo socota, kaasoo ay gacanta ku hayaan Khubaro caalami ah iyo la taliyaasha sharciga ee Guddiga.
Shirkan oo ay isugu yimaadeen xubno ka socda bulshada rayidka ah iyo Guddiga doorashooyinka Puntland ayaa la filayaa inay kaga doodaan Istaraatiijada iyo arrimo ku saabsan hirgalinta nidaamka dimuqraadiyadda.
Xoghayana TPEC, Liibaan Saalax (Gegiror), ayaa saxaafadda u sheegay in maalmaha uu socdo kulankan la is-dhaafsan doono xogo ku saabsan nidaamkan gaar ahaan habka loo diyaariyay Istaraatiijiyada waxyaabaha lagu dari karo iyo sida ugu haboon ee loo isticmaali doono.
Wuxuu intaas ku daray in Guddiga ay muddooyinkii dambe shaqo badan hortaallo oo ay ka shaqaynayeen sidii loo dar-dargalin lahaa nidaamka axsaabta badan islamarkaana la diiwaangaliyay 4 urur.
Dhinaca kale waxaa magaalada Muqdisho safar shaqo ugu Maqan Guddoomiyaha Guddiga Cabdiraxmaan Diiriye Samatar iyo qaar kamid ah xubnaha TPEC.
Guddoomiyaha ayaa sidoo kale dhawaan socdaal shaqo ku tagay dalka Ethiopia kaasoo ku saabsanaa sidii Puntland looga hirgalin lahaa nidaamka axsaabta badan islamarkaana looga guuri lahaa habka qabaliga ah ee lagusoo dhaqmayay 19 sano.